गगन थापाकी १ छोरीबाहेक परिवारका सबै सदस्यमा देखियो को’रोना – AB Sansar
गगन थापाकी १ छोरीबाहेक परिवारका सबै सदस्यमा देखियो को’रोना
October 11, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on गगन थापाकी १ छोरीबाहेक परिवारका सबै सदस्यमा देखियो को’रोना
काठमाडौं । को’रोना स’क्रमित नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको परिवारका सदस्यमा को’रोना भा’इरस एकपछि अर्को गर्दै देखिन थालेको छ । सुरुमा गगनमा मात्रै सं’क्रमणको पुष्टि भएता पनि उनका बुबा आमा र काकामा सं’क्रमण देखिएसँगै अहिले आएर थापाकी एक छोरी र श्रीमतीलाई सं’क्रमण पुष्टि भएको हो।
थापाकी पत्नि र एक छोरीलाई आज सं’क्रमणको पुष्टि भएको भएता पनि अर्की छोरीमा भने को’रोना देखिएको छैन । उनीहरु होम आइसोलेसनमा नै बसेर आराम गरिरहेका छन् ।यो पनि पढ्नुहोस:बुटवलमा एकै दिन तीन को’रोना स’ङ्क्रमितको नि’धन, बुटवल । बुटवलमा को’रोना स’ङ्क्रमितको एकै दिन आज तीन जनाको नि’धन भएको छ ।
अस्पतालका कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि सघन उपचार कक्षको अभाव हुँदा एक स’ङ्क्रमितको भने उपचारका लागि बुटवल बाहिर लैजाँदै गर्दा बाटामा नि’धन भएको छ ।बुटवलको स’ङ्क्रमितको उपचारका लागि सघन उपचार कक्ष नपाइएका दाङको बेलझुण्डीस्थित को’रोना विशेष अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा आज बिहान बाटैमा नि’धन भएको हो ।
बुटवल–११ का ८४ वर्षीय पुरुषको उपचारका लागि लैजाने क्रममा कपिलवस्तुको धानखोलामा नि’धन भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनी लामो समयदेखि मुटु रोगको समस्याले पीडित रहेको जनाइएको छ ।
को’रोना स’ङ्क्रमित बुटवल–११ की ६१ वर्षीया महिलाको उपचारका क्र’ममा आज बिहान करिब २ बजे को’रोना विशेष अस्पताल बुटवलमा नि’धन भएको हो । बुधबार को’रोना विशेष अस्पतालको कक्षमा भर्ना भएकी स’ङ्क्रमित महिलाको उपचारका क्रममा नि’धन भएको जनाइएको छ ।
श्वासप्रश्वासको स’मस्या देखिएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दागर्दै उनको नि’धन भएको अस्पतालले जनाएको छ । बुटवल–१ का ७० वर्षीय पुरुषको गए राति १० बजे को’रोना विशेष अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा नि’धन भएको हो । शनिबार अस्पताल भर्ना भएका उनमा यही असोज २२ गते कोरोना स’ङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
बहिनी भेट्न आमालाई मोटरसाइकलमा बोकेर डडेल्धुरा जाँदै गरेका शंकरको बाटोमै ग’यो ज्या’न, आमाको अवस्था ग’म्भिर
शिक्षा मन्त्रीले भनेः डा. केसी म’रेपनि म’ रोस्
बिहीबारदेखि बे,पत्ता भएका रुपन्देहीका स्वास्थ्यकर्मी अहेब मृ त भेटिए
डा. केसी र आचार्यलाई रविनाको चुनौती : मैदानमा आउनुहोस्, जसले जित्छ उसलाई शुभकामना दिऊँ !!